Dirqalaalee dhangeessuu adda addaa akka ifteessitu fi man'eewwan filamanitti amaloota akka fayyadamtuuf si heeyyama.
Dirqaalawwan dhangeessuu man'e (wwaniif)ifteessi.
Dirqaalawwan barreeffamaa man'eedhaaf ykn faayilota afaan Eeshiyaa keessaa qindeessa. Afaan Eeshiyaa akka of danda'u argaaruuf, Meeshaalee - Dirqaalawwan - Qindaa'ina Afaani -Afaanoota filii, ittaansuudhaan sanduuqa Dandeessise bal'ina gargaarsa afaan Eeshiyaa keessaa fili. Dirqaalawwan barreeffama Eeshiyaa galmeewwan HTML keessatti gatamaniru.
Man'eewwan filamaniif dirqalaalee ittisaa ramada.
Title is: Man'eewwaan Dhangeessi